မြန်မာပြည်ကိုချစ်သည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မြန်မာပြည်ကိုချစ်သည်
Posted by manawphyulay on Sep 29, 2011 in Creative Writing, Short Story | 14 comments
မနော အတွေး မနော အမြင် မြန်မာပြည်ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ မလွန်ပါဘူးနော်
ခေါင်းစဉ်က မြန်မာပြည်ကို ချစ်သည်ဆိုတော့ ဘာပါလိမ့်ပေါ့။ တကယ်ပါ ကျွန်မ မြန်မာပြည်မှာ နေရတာ အလွန်ပျော်ပါတယ်။ ကိုယ့်မြေမို့ ကိုယ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့် ချစ်စရာ မြန်မာ ဖြစ်တာ
အမှန်ပါရှင်။ ကျွန်မ ဘာကြောင့် မြန်မာပြည်ကို ချစ်တာလဲဆိုတာ ပြောပြပါမယ်။ ကျွန်မတို့မြန်မာပြည်ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်က ဘာတဲ့ ခေတ်မှီတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သစ်ဆီသို့တဲ့။ ဒီတိုင်းပဲ နည်းပညာတိုးတက်ခေတ်မီနေတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ကျွန်မတို့အတွက် လိုင်းကားတွေကို အဆင်ပြေအောင် စီးနိုင်ရန် ချထားပေးတဲ့အတွက် ၂၀၀ ကျပ် အထူးကားဆိုတာတွေကိုလည်း စီးခွင့်ရပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ခရီးသည်များအဆင်ပြေအာင် ခုံပြည့်ဆိုပေမယ့် ခြေနင်းခုံထိ တင်ဆောင်ပေးခြင်းကလည်း တကယ့်ကို မြန်မာအချင်းချင်း ကူညီရိုင်းပင်းတယ်လို့ မြင်မိတယ်။ နောက်တစ်ချက်က
ကားပေါ်မှာ မတ်တတ်ရပ်တဲ့အခါလည်း ကိုင်နေရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက် လူများကို ကြပ်ပိတ်သိပ်အောင် တင်ပေးထားတာကလည်း တကယ့်ကို ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းလှပါတယ်။ ဒီလိုစီးလို့လည်း
ကျွန်မတို့တစ်တွေ ကျန်းမာရေးကောင်းအောင်လည်း လုပ်ဆောင်ထားပေးပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ထိုင်ခုံရရင် လမ်းခရီးက အလွန်ဝေးတဲ့အတွက် အထိုင်များပြီး ချိနည့်သွားမယ်လို့လည်းကြိုတင်တွေးပေးထားပါသေးတယ်။ နောက် ထပ်မံပြီး ကားစီးရင်းနဲ့ အနားယူနိုင်အောင်လည်း ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ ကားပေါ်မှာ အိပ်ပျော်လို့ သုံးလေးခါနိုးပေမယ့်လည်း မှတ်တိုင်တွေမှာ
အိပ်ရေးပျက်မှာစိုးသကဲ့သို့ အလိုက်သိစွာကျောက်ချရပ်နားပေးခြင်းအားဖြင့်လည်း ကူညီပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
ချစ်စရာ မြန်မာဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ အများပြည်သူကျန်းမာရေး ညီညွတ်စေဖို့အတွက် လမ်းများကိုလည်း ချိုင့်ခွက်များအဖြစ် သေသေချာချာ မွမ်းမံပေးထားခြင်းဖြင့် ကျွန်မတို့မှာ
ရင်ပြည့်ရင်ကယ်ဖြစ်ခြင်းမှ ကင်းဝေးရတဲ့အတွက်လည်း မြန်မာပြည်မှာ နေရတာ နေပျော်ပါတယ်။ အဲ နောက် နည်းပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အညီ မြန်မာပြည်ရဲ့ အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်များကို
ဂရုတစိုက် ပြုပြင်နှေးကွေးပေးထားတာကိုကလည်း တကယ် အလိုက်သိတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ဒါက အကြောင်းမဲ့ နှေးကွေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့က နိုင်ငံတကာနဲ့
ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ဖို့အတွက် အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ အလုပ်တွေကို လုပ်စေဖို့ အင်တာနက်ဖွင့်ထားရင်း မတက်သေးတဲ့အတွက် အလုပ် နှစ်ခု သုံးခုကို လုပ်ရင်း သုံးစွဲတဲ့အခါ အလုပ်တွေလည်း တစ်ပြိုင်တည်း ပြီးစီးပါတယ်။
ဒီလောက် အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်ထားပေးထားတာတောင် ဘာလို့များ ပြည်ပကို သွားပြီး ကျွန်ခံနေကြတာလည်းဆိုတာကို နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်မိပါတယ်။ နောက် မြန်မာပြည်က
ဖုန်းလိုင်းတွေလုပ်ပေးထားတာကလည်း အလွန်မှ ပညာရှိတွေမှ ဒီလိုလိုင်းမျိုးကို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူလို့တော့ ကျွန်မကတော့ မြင်မိတယ်။ ကျွန်မတို့အတွက် အရမ်းအဆင်ပြေတယ်လို့ ခံစားမိတယ်။
ဟုတ်တယ်လေ။ ဖုန်းလာလို့ကိုင်လိုက်ရင် တကယ်လို့တစ်ဖက်လူက ပိုက်ဆံချေးတာတို့၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်မကြည်တဲ့သူတို့ဆီက ဖုန်းလာပြီဆိုရင် ဟဲလို ဟဲလို မကြားရဘူး။ မကြားရဘူး။
ဘာတွေပြောနေတာလဲဆိုပြီး ဖုန်းပိတ်လိုက်တဲ့အတွက် ချေးငှားခြင်းမှာလည်း ကင်းဝေးပါသေးတယ်။ ဈေးသည်များအတွက်လည်း ကားမှတ်တိုင်အမိုးများ သေချာကျကျနန
တည်ဆောက်ထားပေးခြင်းဖြင့် မြို့တော်ကြီး အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့် ဈေးသည်များအတွက် စိတ်ပူပေးတာကြောင့်လည်း မြန်မာပြည်ကို ချစ်မိပါသည်။ အမယ် ရှိသေးတယ်နော် မြန်မာပြည်ကို ဘာကြောင့် ကျွန်မ ချစ်မိလည်းဆိုတာက လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ ရောင်းချနေတဲ့သူများ ဘေးရန်ကင်းကင်းနဲ့ သားငါးသည်များ အလေးခိုးနိုင်စေရန် ယူနီဖောင်းဝတ်များက ခါးမှာ
တုတ်များဆောင်ပြီး စောင့်ရှောက်ပေးကြတာကလည်း အလွန်ပဲ ဘေးရန်ကင်းလှပါတယ်။ ခေတ်မီတိုးတက်လာတယ်ဆိုတာ ဒီလောက် ပြောရုံနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်လေ မဟုတ်ဘူးလား။ နောက် ခေတ်မီတာ
ရှိသေးတယ်ရှင့်။ ဟိုးအရင်တုန်း လိုက်လံတောင်းစားသော သူများသည် စုတ်ပြတ် နုံချာပြီး တကယ်ကို အဆင့်မရှိလှပါဘူး။ ဟော ခု ဘယ်လောက်တိုးတက်လာသလဲ ယူနီဖောင်းဝတ်စုံဖြူအပြည့်နဲ့ဆိုတော့ ပေးတဲ့သူလည်း အဆင့်မြင့်မြင့် ပေးလို့ရတာပေါ့။ အင်း ဒါကြောင့် ကျွန်မ မြန်မာပြည်ကို ချစ်တယ်လို့ ပြောမိတာ မလွန်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်နော်….
ဟုတ်ပါ့မမနောရယ် လိုင်းကားဘေးကဖြတ်သွားရင် ကွမ်းသွေးထွေးတဲ့အခါ ကိုယ့်မစင်အောင်၊ ခုန်ပြီးရှောင်ရတဲ့အခါကျပြန်တော့လည်း
ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုစေတာမို့ ကျွန်မလည်း မြန်မာပြည်ကို ချစ်လိုက်ပါရစေနော်
လျှပ်စစ်မီးက လည်း စေတနာ ကောင်းတယ်ဗျ
ကိုး၇ီးယား ဇာတ်လမ်းစွဲ နေသူတွေ အတွက် ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနဲ.
ဟေ့.. နင်လူမျိုးခြားမဟုတ်လည်း.. နင့်ဘိုးဘွား(၁၀)ဆက်ကတော့.. လူမျိုးခြားဖြစ်မှာပဲ..။
ဒီလိုမြန်မာပြည်မှာကြီး..မြန်မာ့လေရှုနေသူက.. ဒီလိုမြန်မာပြည်ကိုခနဲ့-ရွှဲ့ ပြောတာဟာ….
တယုတ်တွေ (ဒါမှမဟုတ်)ကလားတွေ (ဒါမှမဟုတ်) ယိုဒရားတွေ(ဒါမှမဟုတ်) ..ဘာကောင်ဟုတ်ဟုတ်ကွာ…(လူတော့သေချာတယ်မဟုတ်လား!!… ) ..
ယုတ်မာပက်စက်.. နို့ဆီခွက်လောက်တောင် ဇောက်မနက်တဲ့အကြံနဲ့လို့…
အင်တာနက်လေးတက်လိုက်.. အလှူလေးလုပ်လိုက်နဲ့..မဟာရန်ကုန်မှာ နေသူက..
.. တောထဲနေ..စပါးစိုက်ရင်း ထမင်းငတ်.. ပေါ်တာလိုက်.. စစ်ပြေးနေရတဲ့.. တိုင်းရင်းသားဘ၀တွေမှအားမနာ… ပြောရက်လိုက်တာလို့..
မပြောလိုပါ… မပြောလိုပါ… အရေပြားတထောက် အသားအရောင်ကြည့်၍..
ကျွန်မရွဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်အရာမဆို မြန်မာမှာနေပြီး ဗမာစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် အကောင်းမြင်တဲ့ဘက်ကပဲ ကြည့်မြင်သုံးသပ်ဝေဖန်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မပြောရက်ပေမယ့် ပြောသွားလိုက်တာ ရစရာကိုမရှိတော့ဘူး သဂျီးရယ်…
နှစ်လုံးပြူးအားကိုးနဲ့ ပြောတယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ထားလိုက်ပါမယ်။ ဒါကြောင့် အဘိုးအဘွားတွေက ဆုံးမတာ ကိုယ်ကောင်းတိုင်း သူများ ကောင်းချင်မှကောင်းတာတဲ့။ မှန်တိုင်းလည်း အမှန်ကို မကြည့်ရဘူးတဲ့။ သြော် လောက လောက….
သဂျီးက မြန်မာစကားတောင် သေးသေးလေးပဲ တတ်တော့တယ်….။
အမရေ နောက်ဆုံးအပိုဒ်ကလေ “လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ ရောင်းချနေတဲ့သူများ ဘေးရန်ကင်းကင်းနဲ့ သားငါးသည်များ အလေးခိုးနိုင်စေရန် ယူနီဖောင်းဝတ်များက ခါးမှာတုတ်များဆောင်ပြီး စောင့်ရှောက်ပေးကြတာကလည်း အလွန်ပဲ ဘေးရန်ကင်းလှပါတယ်။” ဆိုတဲ့ စာသားကိုတော့ တော်တော် ခိုက်တယ်သိလား ဈေးသွားရင်တောင် ယူနီဖောင်းနဲ့လူတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ ဈေးဝယ်မှ နို့မို့ဆို ဈေးသည်တွေရဲ့ အလိမ်ခံနေရမယ် ……..
“ဟိုးအရင်တုန်း လိုက်လံတောင်းစားသော သူများသည် စုတ်ပြတ် နုံချာပြီး တကယ်ကို အဆင့်မရှိလှပါဘူး။ ဟော ခု ဘယ်လောက်တိုးတက်လာသလဲ ယူနီဖောင်းဝတ်စုံဖြူအပြည့်နဲ့ဆိုတော့ ပေးတဲ့သူလည်း အဆင့်မြင့်မြင့် ပေးလို့ရတာပေါ့။ ” အစ်မ အဲတာဘယ်သူတွေလဲဟင် မသိလို့နော် …..
ြဲ့မန်မာစံတော်ချိန် ည ၈နာရီ ရှိပါပြီ။ သတင်းများကို မောင်ထူးဆန်းမှ ကြေညာပါတော့မည်။
MG ရွာ နေ ဒေါ် မနောဖြူသေး ..သည်းခံပါခင်ဗျာ.. ဒေါ်မနောဖြူလေး အား မနေပေါင်တော်မြို့ နေ သမ္မတ ကြီးမှ ” ပိုလီ ယားနာ” သည်းခံပါခင်ဗျာ ..ပိုလီယာနာ ဆုတံဆိပ်ချီးမြှင့်လိုက်ခြင်း ..
ဘယ်သူရှာဖွေစုဆောင်းထားတာလဲ မသိဘူး။ မှတ်သားလောက်ပါတယ်…….မိတ်ဆွေတို့လည်း Made in Myanmar ထဲက ဘာတွေ ကျန်သေးလဲဆိုတာ ၀ိုင်းဖြည့်ပေးလိုက်ပါအုံး……
လွန်ခဲ့သောနှစ်များဆီက .. ဆောက်လက်စ အဆောက်အဦးတစ်ခုကို ၀င်စစ်တော့ တိုက်အလည်တိုင်တွေမှာ သံချောင်းတွေ ရှိရမယ့် အစား ၀ါးပိုးဝါးတွေခံပြီး ဘိလပ်မြေလောင်းတာတို့ အောက်ခံ ဆလပ်လောင်းတော့လည်း သံချည်သံကွေးမလုပ်ပဲ ၀ါးပိုးဝါးနဲ့ ဆလပ်လောင်းတဲ့ နည်းပညာသစ်ကို အသုံးပြုနေတာကို တွေ့ရပါသတဲ့။ ဒါနဲ့ ကမ္ဘာကို ဒီနည်းပညာသစ်ချပြဖို့ မ၀ံမရဲ ဖြစ်နေသေးတာကြောင့် ကန်ထရိုက်ကို အစိုးရ အစောင့်အရှောက်နဲ့ ထားပြီး ဆက်လက်လေ့လာနေကြပါသတဲ့။ မြန်မာပြည်တွင် လုပ်ပါသည်။
ကွေကာအုတ် ဆိုတာကို တရင်းတနှီး ဖြစ်နေကြပြီးတဲ့ ကိုယ်တို့အတွက်ကတော့.. ဘီစကွတ်ကွေကာအုတ် ဆိုတာကလည်း ဒီကနည်းပညာပါပဲ.. oat ဆိုတဲ့ ဂျုံနဲ့ လုပ်ရမယ့် ကွေကာအုတ်ကို ရွှေမြန်မာအချို့က ဘီစကွတ်စက်ရုံက အကျိုးအပဲ့ မုန့်အစတွေ ၀ယ်ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ကွေကာအုတ် ထုတ်ပါသတဲ့။ ကောင်းလေစွ ။
တစ်ခါကဈေးထဲမှာ အုန်းဆံဖတ်တွေ ကားလိုက်လာလာဝယ်လို့ ဘာလုပ်ဖို့တုန်း တိုးတိုးတိတ်တိတ် စုံစမ်းကြည့်တော့ ခြင်ဆေးခွေ ထုတ်ဖို့အတွက် အဓိက က အုန်းဆံဖတ်ဖြစ်ပါသတဲ့။ အုန်းဆံဖတ်မီးရှို့မှတော့ ခြင်ပြေးတာ မဆန်းပါဘူးလို့ပဲပြောချင်တယ်။
နွားနို့ ထဲကို ရေရောတာကို မပြောတော့ဘူး။ နွားနို့သောက်ဖူးကြတယ်မဟုတ်လား ။ အဲဒီနွားနို့ ထဲမှာ မလိုင်ဖတ်ကလေးတွေ ပါတယ်လေ။ မလိုင်ဖတ်မပါရင် မသောက်ချင်တဲ့ သူတွေ ၊ နွားနို့ အစစ်လို့ မထင်သူတွေအတွက် မလိုင်ဖတ်အတုပေါ့ဗျာ။ နွားနို့သောက်ချင်စိတ်လည်း ပျောက်ရင်ပျောက်သွားလိမ့််မယ်။ တစ်ရူးလိပ်အဖြူတွေကို ကျစ်ပြီး ဖဲ့ပြီး နွားနို့ထဲထည့်ပါသတဲ့။ မြန်မာပြည်တွင် လုပ်ပါသည်ဗျာ။ သာကီဝင် ရွှေမြန်မာတွေပါ။
မှုန့်နေတာပဲ ဆိုရင်တော့ ငရုတ်သီးမှုန့် အရသာခံမနေပါနဲ့ ..ဖွဲအရသာကိုသာ မြည်းကြည့်ပါတော့လို့ပြောချင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ….. ဒါကတော့ .. ပြဌာန်းစာအုပ်တွေ အပြင်ရောက်နေတဲ့ ဈေးကွက်တစ်ခုပါ.. လူကြုံမှာတာနဲ့ တစ်ခါဝယ်ပေးဖူးတယ်..ကျောင်းက စာအုပ်က ခွဲတမ်းနဲ့ ရတာမလို့တဲ့.. ကလေးက ဖတ်စာအုပ်မရဘူးတဲ့ (ပညာရေးဖြင့်ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံကြီး တည်ဆောက်မလို့ဟာကိုကွာ …. တောက်… ဖတ်စာအုပ်မရှိတာနဲ့ မဆောက်လိုက်ရဘူး ) ဤကား စကားချပ်……….
၀ယ်ခဲ့ပေးဆိုတာနဲ့ ၀ယ်ဖူးတယ်.. ဈေးကလဲကောင်း စာရွက် အသား ကလဲကောင်း .. အပြင်က စာအုပ်က ပိုကောင်းနေတယ်..ဟ ဆိုတော့ ရောင်းတဲ့လူက အတုမို့ လို့ ကောင်းတာပါတဲ့ဗျာ………
Posted by ပြတိုက်သူလေး on January 8, 2011 at 7:30pm
ကိုယ် ကတော့ ချစ်လွန်းလို့ လား..=ဘာလားတော့မသိ..ဒီတိုင်းပြည်ထဲ..နေရတာကို တော်တော်.စိတ် ညစ်နေပြီ။
ဘာပဲ.ပြောပြော ..မနော ပြောသလို ချစ်ပါသည်…ပါပဲ။
ဗမာပြည် ကို ချစ်ရမယ်လေ
ဗမာ တွေ က